Teo am-panarahana ny lalao nifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara sy ny RD Congo ny alahady lasa teo, ny fokonolona no tapaka tampoka ny jiro.
Niakatr’afo izy ireo ka nankany amin’ny biraon’ny jirama, ka raikitra teo ny torabato. Nisy fahasimbana ny birao ary nalady tonga ny mpitandro ny filaminana nandamina ny zava-nitranga tany an-toerana. Tsy nahita hatramin’ny farany io lalao io, ny fokonolona, ka nahatonga izao fahatezerana izao.
Mbola nanao teny fandrahonana ihany koa ireto farany, fa hodoran’izy ireo ity birao ity, raha mbola mitohy izao fahatapatapahan’ny jiro ao Vondrozo izao.
Nilaza ny tompon’andraikitry ny jirama tany an-toerana, fa 50 kilowatt ihany no tanjaky ny gropy mandeha any ary tsy mahenika ny tanàna izany, ka nahatonga ny fahatapahana. Nisy fahasimbany anefa izy io ny 28 jona lasa teo ary bilao tao amin’ny motera no nahatonga ny olana. Mangataka milina amin’ny fitondram-panjakana sy gropy roa izay manana tanjaka 72 kilowatt izy ary amin’izay mahenika ny tanàna rehetra ny jiro, dia ho afaka ny olan’ny delestazy.
Marihana fa tao anatin’ny telo andro nisesy no niseho izay fahatapahan’ny jiro izay ary tsy tokony hisy intsony izany amin’io lalao ampahefa-dalana ataon’ny Barea amin’ny alakamisy io, hoy ny vaovao avy any an-toerana.
Olona roa maty voatifitra, telo naratra
Nisehoana asan-jiolahy indray tao amin’ny distrikan’i Miandrivazo, ka nahafatesana sy nandratrana olona. Roa no maty voatifitra ary telo naratra mafy izay mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny tobim-pahasalamana ao Miandrivazo amin’izao. Omaly vao mangiran-dratsy no nisehoan’io fanafihana io, tao amin’ny fokontany Betanatanana, kaomina sy distrikan’i Miandrivazo, faritra Menabe. Andian-jiolahy tsy fantatra isa, nirongo basim-borona sy kalaky ary famaky no tonga nanafika ity tokantrano iray, izay misy fianakaviana dimy.
Nitaky ny vola sy firavaka sarobidy ireo mpanafika. Tsy nahafa-po azy ireo ny zavatra azony, ka ombin-tsarety roa tao am-bala no nentin’izy ireo. Nidina tany an-toerana ny mpitandro ny filaminana ary nanokatra ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olon-dratsy. Andrasana ny mety ho tohin’ity raharaha ity.
Fandresen’ny Barean’i Madagasikara
Naneho ny hafaliany ny malagasy, nitohana ny fifamoivoizana
Tao anatin’ny fitaintainana no nandraisan’ny vahoaka malagasy ny fandresena, izay nahazoan’ny ekipam-pirenena malagasy ny Barean’i Madagasikara fandresena hiakarana any amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana. Afaka trosa tamin’ny kongoley ny ekipa malagasy, na dia resin’izy ireo tamin’ny isa mavesatra aza ny gasy tamin’izany. Naneho ny hafaliany ny malagasy ny alin’ny alahady teo, taorian’izay fandresena miezinezina izay. Kiririoka, anjomara, bapampa, tako-bilany sy ireo fitaovana hafa izay nentina nanehoana izay hafaliana izay. Nitohana ihany koa ny fifamoivoizana ary naharitra ora roa izany, raha ho an’ny tetsy Analakely, Behoririka, Andravoahangy ary Ankadifotsy. Nobahanan’ireo vahoaka nifaly ny fiara nandalo ary teo no nisian’izay fitohanana lavareny izay. An-kilany, nirantiranty nameno ny arabe sy ny lalana teny rehetra teny ny sainam-pirenena malagasy, ny tandrok’omby maneho ny sarin’ny Barea sy ny loko maro samy hafa. Nivoaka ny arabe taorin’io fandresen’ny Barea io ihany koa ny zaza amam-behivavy, ny ankizy, ny antitra, ny tanora ary ireo vehivavy nitondra vohoka, naneho izay hafaliana izay. Tafakatra amin’ny dingana ampahefan-dalana noho izany ny Barean’i Madagasikara ary amin’ny alakamisy izao no hiatrika izay lalao izay, izy ireo.
Marihana, fa nisy “écran géant” lehibe iray tetsy amin’ny Gara Soarano nanarahin’ireo olona marobe io lalao natao ny Barea sy RD Congo io. Nahitana mpitandro ny filaminana nifamezivezy koa teny an-toerana ary nandrindra ny fifamoivoizana izy ireo.
Lavanila maintso milanja 800 kilao no saron’ny mpitandro ny filaminana, tao amin’ny distrikan’Ikongo, ny 1 jolay lasa teo. Tafaporitsaka ireo tompon’atoka vao nahita ny mpitandro ny filaminana, fa ny entana kosa no azon’izy ireo. Nopotehina sy nodorana teo anatrehan’ireo manampahefana tany an-toerana ireo lavanila maintso sarona ireo.
Noho ny ezaka nataon’ny zandarimaria tao amin’ny “poste avancé” Mampikony, dia omby 500 mahery no voatazona amin’izao. Ireo biby ireo dia very nandritra ny roa herinandro ary ampy ny porofo, fa omby halatra ireo. Tany amin’ny distrikan’i Mandritsara sy Port Berger no nahazoan’ny zandary fitarainana momba ny fahaverezan’omby ary mbola mitohy ny fanarahan-dia ataon’ny zandary sy ny fokonolona any an-toerana amin’izao fotoana izao.
Mpianatra malagasy any Maraoka
Miantso vonjy, fa tsy mbola nandray vatsim-pianarana
Manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana izahay mpianatra aty Maraoka. Antony, nohon'ny tsy mbola naharaisanay ny vatsy "allocation 2017-2018”, izay vola, voalaza fa efa nivoaka ny volana janoary 2019, saingy tsy mbola tonga any amin’izy ireo amin’izao, satria hoe tsy manana saran-dalana, ahafahany mandeha any Maraoka ny “agent comptable” miasa ao amin'ny “Ambassade de Madagascar” any Dakar. Nisy ny fitadiavana vahaolana sy sosokevitra naroso ny handrotsahana ny volan’izy ireo any amin’ny banky na “virement bancaire”, saingy tsy neken'ny mpiandraikitra izany, hoy ny vaovao avy any an-toerana, eny fa na dia ireo mpianatra “beneficiers” aza no hiantoka ny lany amin’ny fandoavana ny sara-dalana sy ny tapakila an’io mpitam-bola io.
Nitondra ny fitarainana maro tany amin'ny tompon'andraikitra izy ireo, saingy nandamoka daholo izay natao rehetra, ny hany hery dia miantso ary mandefa hafatra ampahibemaso mba ho tonga an-tsofin'ny tompon’andraikitra ny olan’izy ireo, ka hahitan'izy ireo vahaolana haingana.
Marihana, fa “tsy mandray vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana Marokanina izahay mpianatra mandritra izao fiala-tsasatra izao”, hoy izy ireo. Sahirana ihany koa ny ray aman-drenin’ireto farany, araka ny fantatra. Izahay ihany koa dia miaro ny voninahitr’i Madagasikara amin'ny fianarana izay ataonay aty, ka mangataka ny zonay izahay, hoy hatrany ireto mpianatra ireto.